नेपाल आज | शिक्षा नीतिमै एक प्राध्यापकको प्रश्नः कृषिप्रधान देशमा १ प्रतिशत पनि कृषि पढ्ने विद्यार्थी किन छैनन् ? (भिडियो अन्तर्वार्ता)
शिक्षा नीतिमै एक प्राध्यापकको प्रश्नः कृषिप्रधान देशमा १ प्रतिशत पनि कृषि पढ्ने विद्यार्थी किन छैनन् ? (भिडियो अन्तर्वार्ता)
शुक्रबार, २० फागुन २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
फागुन २० । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालको चौथो महाधिवेशनमा सचिव पदका उम्मेदवार डा. विष्णुप्रसाद पोख्रेलले नेपालको शिक्षा नीति परिमार्जन हुन पर्ने बताएका छन् । १ हजार २ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रजातान्त्रवादी प्राध्यपाक संघ नेपालको चौथो महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ ।
डा. पोख्रेलले यसपटकको महाधिवेशनमा प्राध्यापकहरुको समस्या मात्रै होइन उच्च शिक्षामा देखिएका कमजोरीहरु पनि उठाइने बताए । उनले भने, ‘प्राध्यापकहरुको समस्या, उन्नयनका विषय त हाम्रो प्राथमिकतामै हुन्छन् । बुद्धीजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनले आफ्नो मात्रै हितमा चिन्तन गरेर हुँदैन । हामीले उच्च शिक्षालाई कसरी व्यावसायिक, वैज्ञानिक, रोजगारमुलक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि धारणा राख्नु पर्छ । यस विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनु पर्छ । त्यो हामी गर्छौं ।’
डा. पोख्रेलले समसामयिक राजनीतिका सम्बन्धमा जतिसक्दो संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य हुनु पर्ने बताए । यसकालागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘जनजाति, मधेसीलगायतले संविधानमा चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा मुलुक जानै पर्छ । संविधानमा सबैका सबै खाले माग सम्बोधन हुँदैनन् । तर धेरैको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनु पर्छ ।’
dr. bishnu prasad pokharel nepali education system